Ubudlelwano - iBezzia | Bezzia
Ngobudlelwano sibhekisa kwizibopho esizenzayo nabantu esifuna ukuthi babe yingxenye yezimpilo zethu. Kungakho lesi sigaba seBezzia sinikezelwe ku- Ubudlelwano bezithandani: okhiye, izinkinga noma amathiphu okujabulela ubudlelwano obuhle.
Leli yiphuzu elibaluleke kakhulu ezimpilweni zabesifazane, ngoba ngaphezu kokuba yingxenye yetandem engahlala impilo yonke, kuyisinyathelo sokuqala sokuya kokuthile okukhulu: ukuba nezingane. Ngakho-ke, sizogcizelela okhiye be-a ukuhlala kahle, okuzodlula ekubeni kahle nawe, ukwazi umlingani wethu, ukuqonda yena nokunakekela ubuhlobo.
Ngakho-ke, kulesi sigaba sizonikeza izeluleko ikakhulukazi futhi sizame ukukwenza uqonde ukubaluleka kokuxhumana noma ukutotosa ebudlelwaneni bethu.
Kungani kubalulekile ukuzwakalisa ukubonga umlingani wakho
Por UMaria Jose Roldan kwenza Izinsuku ze-4 .
Kuyaziwa kubo bonke ukuthi uthando kufanele lunakekelwe usuku nosuku, ngaphandle kwalokho luzophela ...
Por UMaria Jose Roldan kwenza Amaviki angu-2 .
Ukukwazi ukuthanda umuntu kuyinto enhle kakhulu abantu abaningi abanenhlanhla ukuyizwa. Kodwa-ke, e ...
Ukuthi izingxabano nokulwa kusithinta kanjani isimo esingokomzwelo sabashadikazi
Izimpi noma izingxabano phakathi kwalezi zithandani zivame ukudala izinkinga ezahlukahlukene ezingeni lomzwelo kubantu ababili. Ngokubuka kwe…
Por UMaria Jose Roldan kwenza Amaviki angu-3 .
Abantu abaningi banebhadi othandweni futhi bavame ukuzibuza ukuthi iyini imfihlo yalabo ...
Ungazi kanjani ukuthi umbhangqwana ugugile
Kujwayelekile impela ukuthi noma imuphi umbhangqwana ubhekane nezikhathi ezimnandi nezinye ezimbi. Kwezinye izimo, izinkinga ...
Ithonya lasehlobo kulezi zithandani
Idatha ngaleyo ndlela ikhombisa futhi ifakaze futhi ukuthi ngokufika kwehlobo, imibhangqwana eminingi ...
Ukubaluleka kokuba nendawo yomuntu siqu kwabashadikazi
Por UMaria Jose Roldan kwenza Amaviki angu-4 .
Ukuba nomlingani akusho ukuchitha amahora angama-24 ngosuku nomuntu omthandayo. Ezikhathini eziningi, i ...
Kubashadikazi noma ebudlelwaneni, kunezinto eziningana okungafanele zivunyelwe kunoma yikuphi. Uma ku ...
Ungayeka kanjani ukuthanda umuntu ongakuthandi
Por UMaria Jose Roldan kwenza Inyanga e-1 .
Ngabe kukhona okungaba buhlungu kumuntu kunokuthandana nomunye umuntu ongahambisani naye? Kungafika ...
Ungalutshela kanjani uthando lwangempela oluvela kokungenampilo
Uthando lwehlukile ngombono nangokwenza. Iningi labantu libona uthando njengo ...
Kungani kungekho mibhangqwana eyenelisayo?
Kungaphenduka kube yithemba labantu abaningi, iqiniso lokuthi akekho kubalingani babo ofinyelela kubo ...
Iphilisi yokulawula inzalo: izinzuzo nezinkinga
Kukhala emva kokwenza uthando
Izimpawu ezikhombisa ukuthi i-ex yakho iyaxolisa ukuthi yamshiya nawe
Isithandwa siba nini isithandani?
Lapho umndeni wami ungamemukeli umlingani wami